I-Photoshop CC iya kukuvumela ukuba ufumanise kwaye ukhethe izinto ngonqakrazo olunye | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Inomdla indlela i-Photoshop iguqukile ngayo ukuze sibone uphuculo olucacileyo minyaka le, esivumela ukuba sigcine imisebenzi ebinokusithatha ngaphambili okanye imizuzu okanye iiyure. Yinto itekhnoloji enayo namhlanje. Ke ngoko, kuyathakazelisa ukuba sinakekele kuhlaziyo olutsha kwiinkqubo ezinje ngeAdobe's.
Ngeli xesha kuzisa inqaku elitsha lesixhobo se-Photoshop esi-smart Ndiyakwazi ukubona izinto ngonqakrazo olunye. YiAdobe epapashe ividiyo ebonisa ukuba isixhobo esitsha sokukhetha sisebenza njani kwaye kungekudala siza kuza kwi-Photoshop CC. Ibizwa ngokuba "Khetha Isihloko", okanye khetha isihloko, kwaye usebenzise ubukrelekrele bokufunda kunye nokufunda ngomatshini iAdobe Sensei ukusishiya simangalisiwe.
Njengoko besitshilo ekuqaleni kweposti, kuyeza sisindise ixesha elininzi kwimisebenzi yokucheba okanye yokukhetha izinto esinokuba nayo kwimeko. Ukuhlelwa kweefoto kuya kuba yinto ekhawulezayo ukuyenza nale nto intsha esebenzisa ukufundwa komatshini kunye nobukrelekrele bokuzenzela; iindlela ezimbini ezikhoyo ngoku kwiinkqubo ezininzi kunye neenkonzo.
Ngaloo mizuzu xa sisebenzisa i-lasso kwi-Photoshop, sinako sebenzisa Khetha Isihloko ukuze ngonqakrazo olunye ukhethe ngokupheleleyo umxholo kumfanekiso. Kungcono ukuba ujonge, kuba kwividiyo besikhe sathandwa yinkqubela phambili kule meko yenziwe yiAdobe.
Ndiyakwazi sebenza ngazo zombini izinto ezizodwa nezingamaqela, kwaye isebenza ngokugqibeleleyo ukukhetha eyona nto ikufutshane ukushiya imvelaphi kwinceba yethu ukwenza zonke iintlobo zotshintsho; into esiyifundise kwakudala kwesi sifundo.
Inkqubo eqhubeka ngohlobo lokuba iya kwenza ukuba umbono ube nexabiso ngakumbi kwixesha elizayo lokudala, kunenkqubo yokwenziwa kwayo. Umlingo uya kwenziwa yi-Photoshop.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izixhobo zoYilo » Photoshop » Isixhobo esitsha esine-Photoshop CC sibona izinto ngonqakrazo olunye